Tadaamun oo Maanta Deeq caafimaad ka qeybisay Kaam ku yaala Boosaaso+sawiro – SBC
Tadaamun oo Maanta Deeq caafimaad ka qeybisay Kaam ku yaala Boosaaso+sawiro
Posted by Webmaster on November 23, 2012 Comments
Waxaa maanta hay’ada Tadaamun deeq gaarsiisay dadka barakacayaasha ah ee ku nool xeryaha Barakac ee ku yaala gudaha Magaaladan Boosaaso
Xeryaha Maanta ay Hay’adu Gaarsiiyay Deeqdan oo u badned Mid caafimaad waxaa ka mid ahaa Xerada Buulamingis ee duleedka magaalada Boosaaso .
Deeqdaan Waxay isugu jirtay dawooyin ay dadka isticmaalaan iyo Baaritaani lacag la’aan ah oo ay samaynaayeen Qaar ka mid ah Dhaqaatiirta ugu caansan magaalada Boosaaso .
Hadaba waxa isagu goobta hadalo ku aadan Howshan halkaasi ka jeediyay madaxa hay’ada Tadaamun C/raxmaan C/risaaq Oo isagu sheegay in markii ay arkeen baahida ay dadka barakacayaasha u qabaan in ay helaan adeeg caafimaad ay ku dhiiradeen in deeqdaan soo gaarsiiyaan dadkan,
Waxaa isna dhankiisa halkaasi mahad celin abaaran ugu jeediyay Hay’ada Tadaamun deeqdan isuduwaha, Wasaarada caafimaadka gobolka Bari Siciid waraabe oo isagu sheegay in hay,adaan ay mudantahy in lagu daydo.
Gudoomiyaha Xerada Buulo mingis Sayid Cali Ibraahim Xasan Ayaa isna Mahad aan la soo koobi Karin ugaga jeediyay Hay’ada Deeqdan Soogaarsiisay ee Tataamun, isagoona sheegay in siweyn loogu maahi qabay ayna gacma furan kaga gudoomayaan.
Arintaan ayaa waxa ay ku soo beeymaysaa xili magaalada bosaso ay ka dilaceen Cuduro ay dhaliiyeen roobabkii ka ada,ay magaalada Bosaso
Isku soo wada duubo hay,ada Tadaamun ayaa noqonaysa hay’adii ugu horeysay oo ka Jawaabtay baaqyo ay diraayeen wasaarada Caafimaadka iyo dadka Barkaca ah oo ahaa in lala soo gaaro dadka danyarta ah daryeel caafimaad.
Ibraahim Maxamuud Kheys